ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုံးရသတင်းများ – (ပို့စ်ခွဲမတင်ပါနဲ့ – ဒီမှာတင်ပါ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုံးရသတင်းများ – (ပို့စ်ခွဲမတင်ပါနဲ့ – ဒီမှာတင်ပါ)
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုံးရသတင်းများ – (ပို့စ်ခွဲမတင်ပါနဲ့ – ဒီမှာတင်ပါ)
Posted by အိမ်လွမ်းသူ on Apr 1, 2012 in 2010/2012/2015 Election, Myanma News | 213 comments
ကျေးဇူးပြုပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုံးရသတင်းများ ကို comment တွင် သိသူများကတင်ပေကြပါ။ တခုတဲမှာ စုစုစီးစီး ဖတ်ချင်လို့ပါ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ (ပို့စ်ခွဲမတင်ပါနဲ့ – ဒီမှာတင်ပါ)
— Kai —
has written 17 post in this Website..
မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ် မှာ ကျွန်တော် ချစ်တဲ့အမိမြေကို အမြန်ဆုံးပြန် ရပါစေ။
View all posts by အိမ်လွမ်းသူ →
နေပြည်တော် မဲရလဒ် များ
ဧပြီ ၁ ရက်၊ ညနေ ၇ နာရီ ၅၈ မိနစ်၊ YPI
ဥတ္တရ သီရိမြို့နယ်မှာ မဲရုံ ၄၉ ရုံအနက် ၄၄ ရုံရေတွက်ပြီး အရ ဦးမင်းသူက မဲအရေအတွက် ၇ ထောင်ကျော်အသာရနေကြောင်း၊ ကျန်တဲ့နေရာ မှာ အနိုင်ရနိုင်တယ်လို့ ဦးမင်းသူရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်က YPI သို့ပြောသည်။
ပုပ္ဗသီရီမြို့နယ်တွင်လည်း မဲရုံ ၈၂ ရုံအနက် ၅၀ ကျော်ရေတွက်ပြီးနောက် ဦးဖြိုးဇေယျာသော်က မဲ ၄ ထောင်ကျော် အသာရနေသည်ဟု ဦးဖြိုးဇေယျာသော်၏ ကိုယ်စားလှယ် ကိုအောင်အောင်က YPI သို့ ပြောသည်။
ကျွန်းစုမြို့နယ်တွင် မဲရုံ(၁၄၂)ရုံရှိရာ (၈၂) ရုံမှ မဲများရေတွက်ပြီးချိန်၌ NLD က မဲရုံ (၆၅)တွင် အနိုင်ရထားပြီး USDP က မဲရုံ(၇)၌သာ အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကြောင့် ဧပြီလ(၂)ရက်နေ့မှသာ မဲရေတွက်မှုပြီးဆုံးနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး လောလောဆယ် တွင် NLD က မဲအရေအတွက် ၁၀၀၀၀ ကျော် အသာစီးရထားသည်ဟု သိရသည်။
လှည်းကူးမြို့တွင် မဲရုံစာရင်း ၅၀ ခန့်မှ မဲစာရင်း အခြေအနေများအရ NLD ပါတီမှ အနိုင်ရရန် သေချာသလောက် ရှိနေသောကြောင့် အောင်ပွဲခံရန် NLD ရုံးရှေ့တွင် လူတစ်ထောင်ကျော်ခန့် စုစည်းနေကြောင်း သိရှိရသည်။
တောင်ငူမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်စိုးမြင့်က မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်အားလုံးတွင် အနိုင်ရရှိထားပြီး ကျေးရွာများမှ ရောက်ရှိလာမည့် မဲစာရင်းရလဒ်ကို စောင့်ဆိုင်းလျက် ရှိနေသည်ဟု သိရပါသည်။
NLD – ၁၀၀၇ မဲ
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၆၂ မဲ
ခမောက် ၈ မဲ
လူ့ဘောင်သစ် ၃ မဲ
မဲစုစုပေါင်း ၂၁၀၅ မဲ
လာရောက်မဲပေး ၁၁၅၂ မဲ
ကြိုတင်မဲ ၂၀ မဲ
NLD ပါတီမှ အနိုင်ရရှိသွားသည်။
လက်ရှိအနေအထားများအရ မိတ္ထီလာမဲဆန္ဒနယ်မှ NLD ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဝင်းထိန် အခြေအနေကောင်းလျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်အောင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်တွင် မဲရုံ ၂၁၃ ရုံရှိရာ NLD ပါတီက မဲရုံ(၂၁၂) ရုံတွင် အနိုင်ရထားကြောင်းသိရပြီး မကြာမီအချိန်တွင် အတိအကျထုတ်ပြန်ကြေညာမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်အောင် NLD ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောပါသည်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ရှိသော ရပ်ကွက် ၂၀ တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် NLD ပါတီသည် မဲပေါင်း ၅၅၆၅၉ ရရှိပြီး အပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Update 8:10 PM
ဦးဇေယျာသော်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သောပုဗ္ပသီရိမဲဆန္ဒနယ်တွင်မဲရုံ၈၂ရုံရှိ သည့်အနက် ၄၆ရုံမဲရေတွက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်အထိ ဦးဇေယျာသော်က မဲအရေအတွက် ၂၀၀၀ကျော်အသာရကာ အနိုင်ရနေကြောင်းနေပြည်တော်ရောက်7Day News သတင်းထောက်ကသတင်းပေးပို့သည်။ထိုရေတွက်ပြီးစီးသောမဲရုံ ၄၆ရုံတွင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှမဲရုံ၃ရုံပါဝင်သည်။မဲရေတွက်ရန်ကျန်ရှိနေသောမဲရုံများမှာ ကျေးရွာများမှ မဲရုံများဖြစ်သဖြင့် နိုင်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းနေကြသည်။
1 April 2012 8:18 PM
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒအမှတ်(၂) ရေကြည်- ၂ မဲဆန္ဒနယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာ လှမြတ်သွေးက အနိုင်ရရှိနေကြောင်း ကနဦးရရှိသော သတင်းများအရ သိရှိရပါသည်။
1 April 2012 8:10 PM
ကျွန်းစုမြို့နယ်တွင် မဲရုံ(၁၄၂)ရုံရှိရာ (၈၂) ရုံမှ မဲများရေတွက်ပြီးချိန်၌ NLD က မဲရုံ (၇၅)ရုံတွင် အနိုင်ရထားပြီး USDP က မဲရုံ(၇)၌သာ အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကြောင့် ဧပြီလ(၂)ရက်နေ့မှသာ မဲရေတွက်မှုပြီးဆုံးနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး လောလောဆယ် တွင် NLD က မဲအရေအတွက် ၁၀၀၀၀ ကျော် အသာစီးရထားသည်ဟု သိရသည်။
1 April 2012 8:04 PM
လောင်းလုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးအောင်စိုးက စုစုပေါင်း မဲအရေအတွက် ၃၅၈၆၀ (မဲအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏ ၇၇ ဒသမ ၈၃) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိမ်းမောင်မှာ မဲအရေအတွက် ၇၀၇၀ (မဲအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏ ၁၅ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း) ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ မဲဆန္ဒနယ်တွင် ပယ်မဲ ၃၁၄၅ မဲ ( မဲအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏ ၆ ဒသမ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်) ရှိခဲ့ပါသည်။
1 April 2012 7:58 PM
1 April 2012 7:52 PM
1 April 2012 7:51 PM
ဧပြီ ၁ ၁၉:၄၀ နာရီ
ဧပြီ ၁ ၁၉:၂၉ နာရီ
၂၆) ဆည်းဆာရပ်ကွက်တွင် NLD ၆၆၆ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၀၀ မဲ။
၂၇) အောင်ဇေယျာရပ်ကွက်တွင် NLD ၈၄၇ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၈၁ မဲ။
၂၈) ရန်ကင်းရပ်ကွက် NLD ၅၀၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၄ မဲ။
၂၉) ဆည်မြောင်းတွင် NLD ၂၇၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၈၆ မဲ။
၃၀) အောင်မေတ္တာမဲရုံ ၄ တွင် NLD ၈၅၃ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇၈ မဲ။
၃၁) ရွာသစ်ပွဲကြို မဲရုံ ၁ တွင် NLD ၆၅၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၈ မဲ။
၃၂) ရွာသစ်ပွဲကြို မဲရုံ ၂ တွင် NLD ၉၈၄မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၉၂ မဲ။
၃၃) ရွာသစ်ပွဲကြို မဲရုံ ၅ တွင် NLD ၁၇၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၂ မဲ။
၃၄) ရွာသစ်ပွဲကြို မဲရုံ ၄ တွင် NLD ၃၀၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၇၀မဲ။
၃၅) မကြီးကန်ရွာတွင် NLD ၁၂၃၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၁၇ မဲ။
၃၆) မြင်သာရပ်ကွက် မဲရုံ ၃ တွင် NLD ၆၃၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၉ မဲ။
၃၇) မြင်သာရပ်ကွက် မဲရုံ ၁ တွင် NLD ၆၆၈ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၄ မဲ။
၃၈) မြို့မ/အိုးဘိုရပ်ကွက်တွင် NLD ၆၉၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၀ မဲ။
၃၉) ရန်မျိုးအောင်ရပ်ကွက်တွင် NLD ၇၁၁ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၁၈ မဲ။
၄၀) ကန်သာယာ မဲရုံ ၁ တွင် NLD ၆၄၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၄မဲ။
၄၁) ကန်သာယာ မဲရုံ ၂ တွင် NLD ၈၈၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၉၂ မဲ။
၄၂) ကန်သာယာ မဲရုံ ၃ တွင် NLD ၁၄၀၆ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၄၆ မဲ။
၄၃) မြင်သာ မဲရုံ ၄ တွင် NLD ၂၃၀မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၄ မဲ။
၄၄) ဆူးပေါက်စမ်းရွာတွင် NLD ၅၁၇ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၆၀ မဲ။
၄၅) ဈေးလယ်စိုးရပ်ကွက်တွင် NLD ၇၀၆ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၈၈မဲ။
၄၆) ရွာသစ်ရပ်ကွက်တွင် NLD ၁၇၈ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၁ မဲ။
၄၇) ပြည်တော်သာရပ်ကွက်တွင် NLD ၁၉၂၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၅၂ မဲ။
၄၈) ရွာသစ်ပွဲကြိုရပ်ကွက် မဲရုံ ၃ တွင် NLD ၁၃၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၂မဲ။
ဧပြီ ၁ ၁၉:၂၂ နာရီ
ကျောက်ပန်းတောင်းမဲဆန္ဒနယ်ရှိ မဲရုံ(၃၄၆)အနက် ကျေးရွာအုပ်စုများမှ မဲရုံ (၁၅၅)နှင့် မြို့ပေါ် မဲရုံ(၁၂)~၇ုံတွင် NLD က အနိုင်ရထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဧပြီ ၁ ၁၉:၁၅ နာရီ
ဒေါက်တာဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းသည် NLD မှ ဦးမန်းဂျော်နီအား မဲအပြတ်အသတ်ရှုံးနိမ့်ထားခြင်းကြောင့် ကျန်မဲများအားလုံရရှိသည့်တိုင် အနိုင်မရတော့ဘဲ ရှုံးနိမ့်သွားကြောင်းသိရသည်။
လက်ရှိ မဲစာရင်းရေတွက်မှု အနေအထားများအရ အပြီးသတ် အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း NLD ပါတီအနေဖြင့် နေရာ ၄၀ ခန့်တွင် အနိုင်ရရှိနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းမှုများအရ သိရှိရသည်။
၁) ဘုရားကြီးရွာတွင် NLD ၄၃၂မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၈၈မဲ တစည ၃၉မဲ။
၂) ဒိုင်းလယ်တောင်ရွာတွင် NLD ၁၁၀မဲ၊ ပြည်ခိုင်းဖြိုး ၉၅မဲ၊ တစည ၁၄မဲ။
၃) ဒိုင်းလယ်မြောက်ရွာတွင် NLD ၁၈၃မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၃မဲ၊ တစည ၁၀။
၄) တံပယ်ရွာတွင် NLD ၅၈၂မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၃မဲ၊ တစည ၁၂မဲ။
၅) ကျည်းတန်ရွာတွင် NLD ၄၁၁မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၀၂မဲ၊ တစည ၃၂မဲ။
၆) ချော်ဖြူရွာတွင် NLD ၆၂၈မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၈၆ မဲ၊ တစည ၃၆မဲ။
၇) မန်းကျည်းကုန်း NLD ၂၀၀ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၀၁ မဲ၊ တစည ၇ မဲ။
၈) ကြာဖွားရွာတွင် NLD ၄၁ မဲ၊ ပြည်ခိုင်းဖြိုး ၁၄၆ မဲ။
၉) ခလံကုန်းရွာတွင် NLD ၁၉၀ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၄၄ မဲ၊ တစည ၃ မဲ။
၁၀) ထန်းဂွရွာတောင်တွင် NLD ၁၃၁မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၁၉ မဲ၊ တစည ၄မဲ။
၁၁) ထန်းဂွရွာမြောက်တွင် NLD ၄၇၀ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၀၂ မဲ၊ တစည ၁ မဲ။
၁၂) သူဌေးကုန်းရွာတွင် NLD ၈၆ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၈ မဲ၊ တစည ၄မဲ။
၁၃) စီသာရွာ မဲရုံ ၂ တွင် NLD ၄၄ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၉မဲ၊ တစည ၁၀ မဲ။
၁၄) စီသာရွာ မဲရုံ ၃ တွင် NLD ၂၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၉၂ မဲ၊ တစည ၂ မဲ။
၁၅) သဲကြီးခင်းရွာတွင် NLD ၄၇၀ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၆ မဲ။
၁၆) ရွာသာအေးရွာတွင် NLD ၆၂၆ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၀၂ မဲ။
ဧပြီ ၁ ၁၉:၀၅ နာရီ
ပုသိမ်မြို့ ရပ်ကွက် (၁၄) မဲရုံ (၂)
ပုသိမ်မြို့ ရပ်ကွက်(၈) မဲရုံ(၄)
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် မုန်းနားစုတာစည် တွင် ၄၇၃၊ ခင်တဲတွင် ၃၅၃၊ သရက်တောတွင် ၇၈၃၊ ရွှေဘိုရွာမတွင် ၆၄၆၊ အင်ဒေါင်းတွင် ၃၇၁၊ ကျောင်းတော်ရာတွင် ၈၂၉၊ တောင်အင်းတွင် ၄၅၇၊ ပေတောတွင် ၅၄၄၊ သမုန်းကုန်းတွင် ၂၂၅၊ ထနောင်းကုန်းတွင် ၅၃၂၊ မအူလေးပင်တွင် ၁၈၈၊ ရေပုတ်ကလေးတွင် ၅၃၇၊ မုံတော်ကြီးတွင် ၂၅၅၊ အနောက်လေးအိမ်တွင် ၂၈၁ မဲဖြင့် NLD ပါတီက အနိုင်ရရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ လတ်တလော သတင်းများအရ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်တွင် NLD ပါတီက ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြင့် အနိုင်ရရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။
ဧပြီ ၁ ၁၈:၅၈ နာရီ
၁) ရန်မျိုးလုံရပ်ကွက်တွင် NLD ၅၆၄ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၈၀မဲ။
၂) မြို့ဟောင်းမဲရုံ ၂ တွင် NLD ၅၆၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၅ မဲ။
၃) ရန်မျိုးအောင်ရပ်ကွက်တွင် NLD ၇၀၈ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၅ မဲ။
၄) မင်းရွာ(တောင်ရွာ)တွင် NLD ၁၆၂ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇၂ မဲ။
၅) ပုထိုးစမ်းရွာတွင် NLD ၂၅၈ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၈၉ မဲ။
၆) မြင်သာရပ်ကွက် မဲရုံ ၄ တွင် NLD ၂၃၀ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၄ မဲ။
၇) ရွာသစ်မဲရုံ ၉ တွင် NLD ၁၇၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၁ မဲ။
၈) ခိုင်ရွာတွင် NLD ၂၀၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၂၀ မဲ။
၉) မယ်လှတောင်ရွာတွင် NLD ၅၇၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၈၆ မဲ။
၁၀) မြင်ကင်းရပ်ကွက်တွင် NLD ၇၀၀ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၁ မဲ။
၁၁) မြို့ဟောင်းမဲရုံ ၂ တွင် NLD ၄၆၃ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၁ မဲ။
၁၂) ရှားဇောင်းကန်ရွာတွင် NLD ၆၅၂ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၀၃ မဲ။
၁၃) ကျောက်ကုန်းရွာတွကင် NLD ၅၇၆ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၈၆ မဲ။
၁၄) သိဂါင်္မဲရုံ (၃) တွင် NLD ၆၃၄ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၀ မဲ။
၁၅) သိင်္ဂါမဲရုံ (၄) တွင် NLD ၄၈၇ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၅ မဲ။
၁၆) သိဂါင်္မဲရုံ (၁) တွင် NLD ၈၆၇ မဲဖြင့် နိုင်။
၁၇) သိင်္ဂါမဲရုံ (၂) တွင် NLD ၅၉၂ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၈ မဲ။
၁၈) လင့်ငင်ရွာတွင် NLD ၄၂၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၂ မဲ။
၁၉) ကန်သာယာမဲရုံ (၃) တွင် NLD ၁၄၃၄မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၆၅ မဲ။
၂၀) ကန်သာယာမဲရုံ (၂) တွင် NLD ၉၁၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၁၀ မဲ။
၂၁) ကန်သာယာမဲရုံ (၁) NLD ၆၆၆ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇၅ မဲ။
၂၂) ရန်မျိုးလုံရပ်ကွက်တွင် NLD ၅၇၄ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၈၃မဲ။
၂၃) မြို့ဦးရပ်ကွက်တွင် NLD ၄၅၇ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၆ မဲ။
၂၄) မကွေးမြို့ပေါ် စုပေါင်းအိမ်ရာတွင် NLD ၃၂၆ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၁ မဲ။
၂၅) မြေနီကုန်းရွာလေးတွင် NLD ၅၃၃ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၅ မဲ။
ဧပြီ ၁ ၁၈:၅၆ နာရီ
လက်ရှိအနေအထားများအရ နေပြည်တော်ရှိ မဲဆန္ဒနယ် အားလုံးတွင် NLD ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အခြေအနေကောင်းလျှက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဧပြီ ၁ ၁၈:၄၇ နာရီ
လားရှိုးမြို့ ၊ရပ်ကွက်(၃) မဲရုံအမှတ်(၁)တွင်
မဲပေးခွင့်ရှိသူ – 1093 ဦး
ဆန္ဒမဲထည့်သူ- 749 ဦး
ပျက်ကွက်သူ 344 ဦး ရှိ
1။အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် (ဦးစိုင်းမြင့်မောင်) – 547 မဲ
2။ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(ဦးစိုင်းစံမင်း)- 31 မဲ
3။ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ဒေါက်တာ နန်းကိန်ဖောင်းတစ်) -126 မဲ
4။ကိုးကန့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ(ဦးလော်ဆင်ကွမ်း) – 24 မဲ
5။လားဟူ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီ(ဦးယောသပ်) –3မဲ
ပယ်မဲ – 18 မဲ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရ
လားရှိုးမြို့ ၊ ရပ်ကွက်(၂) အလက(၅)တွင်
မဲပေးခွင့်ရှိသူ – 1409 ဦး
ဆန္ဒမဲထည့်သူ- 859 ဦး
ပျက်ကွက်သူ – 550 ဦး ရှိ
1။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် (ဦးစိုင်းမြင့်မောင်) – 572 မဲ
2။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(ဦးစိုင်းစံမင်း) – 27 မဲ
3။ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ဒေါက်တာ နန်းကိန်ဖောင်းတစ်) – 142 မဲ
4။ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ(ဦးလော်ဆင်ကွမ်း) – 65 မဲ
5။ လားဟူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဦးယောသပ်) – 15 မဲ
ပယ်မဲ – 38 မဲ ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရ
ဧပြီ ၁ ၁၈:၃၅ နာရီ
၁) ညောင်သာယာမဲရုံတွင် NLD ၂၄၈မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၂၉ မဲ၊ တစည ၁၂၇မဲ၊ NDF ၄၃မဲ။
၂) ကြည်ကုန်းမဲရုံတွင် NLD ၁၄၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၅ မဲ၊ တစည ၃၆ မဲ၊ NDF ၃၀ မဲ။
၃) အောင်မြေကုန်းတွင် NLD ၃၄၄ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၇မဲ၊ တစည ၂၁မဲ၊ NDF ၇ မဲ။
၄) ပေါက်ကုန်းတွင် NLD ၁၅၈ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၆ မဲ၊ တစည ၈၄ မဲ၊ NDF ၃ မဲ။
၅) ချောင်းဆုံတွင် NLD ၂၅၀ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇၂ မဲ၊ တစည ၉ မဲ၊ NDF ၆ မဲ။
၆) အိုင်တလုတ်တွင် NLD ၇၅၂ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၇ မဲ၊ တစည ၃၁ မဲ၊ NDF ၂၅ မဲ။
၇) ကျောင်းကုန်းတွင် NLD ၂၈၇ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၅ မဲ၊ တစည ၁ မဲ၊ NDF ၄ မဲ။
၈) ရွာကန့်လန့်တွင် NLD ၂၂၂ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၂ မဲ၊ တစည ၂၁ မဲ။
၉) ကုလားကုန်းတွင် NLD ၂၅၇ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၀ မဲ၊ တစည ၆ မဲ။
၁၀) မြို့ပေါ် ၂ လမ်းခန်းမတွင် NLD ၆၇၀ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၂ မဲ၊ တစည ၈ မဲ။
၁၁) မြို့မအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် NLD ၃၂၇ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၉ မဲ၊ တစည ၄ မဲ၊ NDF ၃ မဲ။
၁၂) ဘီးလင်းတန်းတွင် NLD ၈၇၇ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇၄ မဲ၊ တစည ၇၄ မဲ၊ တစည ၁၅မဲ၊ NDF ၆ မဲ။
၁၃) ကညင်ဆိပ်တွင် NLD ၃၄၆ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၉ မဲ၊ တစည ၇ မဲ၊ NDF ၂ မဲ။
၁၄) တောင်ကလပ်ကြီးတွင် NLD ၂၄၈ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၂၉ မဲ၊ တစည ၁၂၇ မဲ၊ NDF ၄၃ မဲ။
လားရှိုးမြို့ ၊ရပ်ကွက်(၅) အထက(၆)ရှိ မဲရုံအမှတ်(၅)တွင်
မဲပေးခွင့်ရှိသူ – 1328 ဦး
ဆန္ဒမဲထည့်သူ- 453 ဦး
ပျက်ကွက်သူ -857 ဦး
ပယ်မဲ – 33 မဲ ရှိ
1။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချူပ် (ဦးစိုင်းမြင့်မောင်) 267 မဲ
2။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ(ဦးစိုင်းစံမင်း) 15 မဲ
3။ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ဒေါက်တာ နန်းကိန်ဖောင်းတစ်) 114 မဲ
4။ ကိုးကန့် ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ(ဦးလော်ဆင်ကွမ်း) 22 မဲ
5။ လားဟူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ဦးယောသပ်)2မဲ
ဧပြီ ၁ ၁၈:၂၅ နာရီ
နေပြည်တော် ပုပ္ဗသီရိမြို့နယ်တွင် လက်ရှိ မဲစာရင်းရေတွက်မှုအရ NLD ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဇေယျာသော်က ၉၉၉၈မဲ ဖြင့် ၇၅၆၈မဲ ရရှိထားသော ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်ကို အနိုင်ရရှိနေကြောင်းသိရှိရသည်။
မကွေးတိုင်းရှိ မြို့နယ် မြို့နယ် (၆) မြို့နယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ဧပြီ ၁ ၁၈:၁၉ နာရီ
မဟာအောင်မြေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်တွင် NLD ပါတီမှ ဦးအုန်းကြိုင် က အနိုင်ရရှိသွားကြောင်း သိရှိရသည်။
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ညောင်ပင်စောက်တွင် ၆၉၃၊ ရေဖြူတွင်းတွင် ၂၂၄၊ ကြူဝန်းတွင် ၂၁၈ ၊ဘုရားကုန်းတွင် ၁၃၃၊ ရွာသာယာတွင် ၁၁၃၊ ပြည်သာယာတွင် ၉၄၁၊ မကျည်းစု+သူဌေးကုန်းတွင် ၄၅၀ ၊ ပန်းတုံးကြီးတွင် ၂၀၃၊ သက်တော်ရှည်တွင် ၇၉၄၊ အရှေ့ပိုင်းရပ်ကွက်တွင် ၅၈၀၊ လက်ပံနွယ်တွင် ၁၀၀၀၊ စက်မှု (၁)စက်ရုံတွင် ၃၀၈၊ သရက်ကုန်းတွင် ၃၉၆၊ ကျွဲဒိတွင် ၅၁၃၊ လယ်ဖီလာတွင် ၁၂၅၊ ကျွန်းပင်စင်တွင် ၃၄၇၊ ကျောက်ပန်းတောင်းရွာတွင် ၁၈၃ မဲတို့ဖြင့် NLD ပါတီက အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကော့မှုးမြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ၎င်းတို့ ကော်မရှင်မှ အတည်ပြုချက်လက်မှတ်ထိုးပြီးမှသာလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အောင်နိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာရန် NLD ပါတီအား အကြောင်းကြားထားကြောင်းသိရှိရသည်။ ကော့မှုးတစ်မြို့နယ်လုံးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အောင်မြင်သည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲများ တစ်မြို့လုံးနီးပါး ပြုလုပ်လျှက်ရှိနေသည်။
နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တွင် အပြီးသတ်မဲစာရင်းများ ရေတွက်လျှက်ရှိပြီး လောလောဆယ်တွင် NLDပါတီမှ ဦးမင်းသူမှ အသာရလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဧပြီ ၁ ၁၈:၁၅ နာရီ
၁) နွားရဲတောတွင် NLD ၂၅၄မဲ ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅ မဲ၊ တစည ၅ မဲ။
၂) အောင်သာတွင် NLD ၁၉၈ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၈၃ မဲ၊ တစည ၅ မဲ။
၃) ထန်းစင်မြောက်တွင် NLD ၄၆၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၈၂ မဲ၊ တစည ၁၆ မဲ။
၄) ထန်းစင်တောင်တွင် NLD ၂၇၂ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၃ မဲ၊ တစည ၃ မဲ။
၅) ဗူးသီးကျင်းတွင် NLD ၁၅၇ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၃ မဲ၊ တစည ၂ မဲ။
၆) ရိုးမတွင် NLD ၃၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၃ မဲ။
၇) မြို့ပေါ် မဲရုံ ၂ တွင် NLD ၆၁၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၆၇ မဲ၊ တစည ၁၉ မဲ။
၈) ဖက်ခူးတွင် NLD ၁၄၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၆မဲ၊ တစည ၂ မဲ။
၉) မက္ခရာတွင် NLD ၂၇၁ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၉ မဲ၊ တစည ၂ မဲ။
၁၀) အုတ်တွင်းတွင် NLD ၄၄၈ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၀ မဲ၊ တစည ၅ မဲ။
၁၁) စိမ့်စမ်းကုန်းတွင် NLD ၄၃၂ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၉၄ မဲ၊ တစည ၂၈ မဲ။
၁၂) မြို့ပေါ် မဲရုံ ၇ တွင် NLD ၂၉၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၅ မဲ၊ တစည ၁၁ မဲ။
၁၃) မြို့ပေါ် မဲရုံ ၈ တွင် NLD ၂၉၇ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၉၉ မဲ၊ တစည ၃၂မဲ။
ရေတွက်ပြီးမဲစာရင်းများအရ ပြင်ဦးလွင်မဲဆန္ဒနယ်တွင် NLD ပါတီက USDP ပါတီအား မဲပေါင်းနှစ်သောင်းကျော်ဖြတ်ထားပြီဟု သိရသည်။
ဧပြီ ၁ ၁၈:၀၅ နာရီ
မရမ်းကုန်းတစ်မြို့နယ်လုံး ကြိုတင်မဲ စုစုပေါင်းမှာ NLD ၉၁ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၂၇မဲ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု ၁၈မဲ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် ၄မဲ၊ ဇောတိက ဦးခင်လှိုင်(တစ်သီးပုဂ္ဂလ) ၂မဲ ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိအနေအထားအရ မြောင်းမြမြို့ပေါ်မဲရုံ (၁၂)တွင် မဲရုံအများစု၌ ကြံ့ခိုင်ရေးအမတ်လောင်း ဒေါက်တာဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းသည် NLD မှ ဦးမန်းဂျော်နီအား မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် ရှုံးနိမ့်လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဧပြီ ၁ ၁၇:၅၉ နာရီ
ပဲခူးတိုင်း သနပ်ပင်မြို့ ဘူတာပိုင်းမဲရုံတွင် NLD က ၅၄၇ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ၁၅၀မဲ၊ တစညက ၂၄ မဲရရှိခဲ့ကာ ပယ်မဲ ၃၇ မဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
၂ ရပ်ကွက် မဲရုံတွင် NLD ၆၀၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၂ မဲ၊
၃ ရပ်ကွက် မဲရုံ ၁ တွင် NLD ၅၅၅ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၆ မဲ၊
၂ ရပ်ကွက် မဲရုံ ၂ တွင် NLD ၇၂၃ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၂၄ မဲ၊
၅ ရပ်ကွက် မဲရုံတွင် NLD ၄၉၁ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၄ မဲ၊
၆ ရပ်ကွက် မဲရုံတွင် NLD ၆၃၆ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၄ မဲ၊
၈ ရပ်ကွက် မဲရုံတွင် NLD ၅၂၀ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇၃ မဲ၊
၉ ရပ်ကွက် မဲရုံတွင် NLD ၅၁၂ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၃ မဲ၊
၁၃ ရပ်ကွက် မဲရုံတွင် NLD ၁၁ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၈၆ မဲ၊
၁၁ ရပ်ကွက် မဲရုံတွင် NLD ၂၃၇ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၀ မဲ၊
၁၆ ရပ်ကွက် မဲရုံတွင် NLD ၃၆၈ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၇ မဲ၊
ဧပြီ ၁ ၁၇:၄၉ နာရီ
စာဗူးတောင်းမဲရုံ ၁ တွင် NLD ၁၁၅၀မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၀၀မဲ၊
ဟိုင်းကူးကျေးရွာမဲရုံတွင် NLD ၇၆၆မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၉၃မဲ၊
ဒရယ်ဗိုလ်မဲရုံတွင် NLD ၁၃၈၉မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၈၃မဲ၊
စခန်းကြီးမဲရုံတွင် NLD ၇၂၇မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၀မဲ၊
ဇရပ်ကွင်းမဲရုံတွင် NLD ၁၄၆၉မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၀၀မဲ၊
ကျွန်းကလေးမဲရုံ (၁) တွင် NLD ၁၃၃၂မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၀၆မဲ၊
ဂွေးတောက်မဲရုံတွင် NLD ၆၁၈မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၆၂မဲ၊
လှေလှော်အင်းမဲရုံ (၁)တွင် NLD ၃၉၈မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၉၈မဲ၊
စာဗူးတောင်းမဲရုံ ၂ တွင် NLD ၅၆၃မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၈၉မဲ၊
ဥယျာဉ်ဝမဲရုံတွင် NLD ၇၆၆မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၉၃မဲ၊
ကျွန်းကုန်းမဲရုံတွင် NLD ၆၄၅မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၃၇မဲ၊
မြို့မမဲရုံ ၁ တွင် NLD ၉၅၁မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၅၁မဲ၊
သာယာကုန်းမဲရုံတွင် NLD ၄၀၃မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၀၃မဲ၊
မက်လပ်မဲရုံတွင် NLD ၈၁၂မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၄၅မဲ၊
ဖောင်ကြီးမင်းကုန်းမဲရုံတွင် NLD ၆၃မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၁၂၆မဲ၊
မင်းလွင်ကုန်းဆေးတပ်မဲရုံတွင် NLD ၂၆မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၀၉မဲ၊
ရေဦး၊ တန့်ဆည်၊ ကန့်ဘလူ၊ ကျွန်းလှ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်မြေတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာ မြင့်နိုင် မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ပဲခူးတိုင်း သနပ်ပင်မြို့နယ် ဘုရားကြီးပိုင်း ရပ်ကွက်တွင် NLD ၁၀၁၄၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၈၀၊ တစည ၈၆၊ ပယ်မဲ ၃၃ မဲ၊ ပျောက်မဲ ၁ မဲ တို့ဖြင့် NLD ပါတီမှ အနိုင်ရရှိကြောင်း သိရသည်။
ဖျာပုံမြို့ပေါ် မဲရုံအားလုံးတွင် ၁၃ ရပ်ကွက်မှအပ မှ အပ ကျန်ရပ်ကွက် အားလုံးတွင် NLD က အနိုင်ရရှိကြောင်း သိရသည်။
ဖျာပုံ၊ ဒေးဒရဲ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁၀ အတွက် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အားလုံးတွင် ၁၃ ရပ်ကွက်မှ အပ အားလုံးတွင် NLD က အနိုင်ရရှိကြောင်း သိရသည်။ ဖျာပုံမြို့ပေါ်တွင် ရပ်ကွက် ၁၉ ရှိရာ၌ ၁၈ ခုတွင် အနိုင်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှုံနိမ့်သော ၁၃ ရပ်ကွက်တွင် ခလရ ၉၈ တပ်နယ်မြေဖြစ်သည်။ ဖျာပုံမြိ်ု့နယ်အတွင်းရှိ ရွာ ၄၀ ခန့်တွင်လည်း NLD က အားလုံးနီးပါးတွင် အနိုင်ရရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်တွင် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာဒေါ်မေ၀င်းမြင့်သည် ရပ်ကွက်အမှတ်(၆) မဲရုံ (၁)၊ (၂)၊ (၃) တို့တွင် မဲရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ကျော်ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တနင်္သာရီတိုင်း ၊ ကျွန်းစု မဲဆန္ဒနယ်၌
၁) ရေကန်တော် ကျေးရွာအုပ်စု၌ NLD က ၆၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂ မဲနှင့် ပယ်မဲ ၉ မဲ။
၂) ရေကန်တောင် ကျေးရွာအုပ်စု စကာကီ ကျေးရွာတွင် NLD ၁၂၁ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၄ မဲနှင့် ပယ်မဲ ၄ မဲ။
၃) ကဘင်းကျေးရွာအုပ်စု မကာကျေးရွာတွင် NLD ၁၄ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၀မဲ။
၄) မယ်ဒေါကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဒုကျေးရွာတွင် NLD ၉၃ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၆ မဲနှင့် ပယ်မဲ ၁၂ မဲ။
၅) ရေမြစ်ကြီးကျေးရွာ အုပ်စု ဇာရောကျေးရွာတွင် NLD ၁၈၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၂ မဲနှင့် ပယ်မဲ ၉ မဲ။
၆) ရေမြစ်ကြီး ကျေးရွားအုပ်စု ဆင်ခေါင်းအော် ကျေးရွာတွင် NLD ၂၂ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၁ မဲနှင့် ပယ်မဲ ၁ မဲ။
၇) မယ်ဒေါ ကျေးရွာအုပ်စု ချောင်းကြီးကို ကျေးရွာတွင် NLD ၂၇၆ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၉၊ ပယ်မဲ ၁၅။
၈) ကျွဲကူးကျေးရွာ အုပ်စု ကျွဲကူးရွာတွင် NLD ၃၂၄ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၀ မဲ၊ ပယ်မဲ ၁၉ မဲ။
၉) ၀ဲကြောကျေးရွာအုပ်စု ၀ဲကြောကျေးရွာတွင် NLD ၁၈၂ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၂ မဲ။
စုစုပေါင်း NLD က ၁၃၉၀ မဲဖြင့် အနိုင်ရရှိလျက်ရှိ။
ဧပြီ ၁ ၁၇:၄၀ နာရီ
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ကုလားကုန်းရွာတွင် ၁၄၉၊ မင်းတဲကုန်းတွင် ၁၆၂၊ ရွာသာကြီးတွင် ၅၇၆၊ ပုတီးကုန်းတွင် ၂၃၄၊ ထန်းတောတွင် ၂၀၄၊ ကျွဲခြံတွင် ၃၇၈၊ နဘဲကုန်းတွင် ၁၆၆၊ ဥယျာဉ်ကျစ်တွင် ၆၁၉၊ ရွှေဘိုရွာသစ်တွင် ၃၄၉ ၊ညောင်ပင်ရွာတွင် ၄၀၀၊ မင်းရွာတွင် ၃၅၉၊ သစ်ချိုကုန်းတွင် ၉၄၊ ရွာသစ်တွင် ၂၃၇၊ ရွာသစ်ကုန်းတွင် ၃၆၁၊ ကျောင်းကုန်းကြီး (၁) တွင် ၃၄၅၊ ကျောင်းကုန်းကြီး (၂)တွင် ၆၀၉၊ ကျောင်းကုန်းကြီး(၃)တွင် ၇၆၁ မဲတို့ဖြင့် NLD ပါတီက အနိုင်ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။
1 April 2012 5:36 PM
ပခုက္ကူမြို့ တပ်မ ၁၀၁၊ မဲရုံတွင် NLD ၆၇၀ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၀ မဲ၊ ခလရ ၂၅၉ မဲရုံတွင် NLD ၂၆၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၃ မဲ
1 April 2012 5:33 PM
ပဲခူးတိုင်း သနပ်ပင်မြို့ရှိ ငါးချဉ်ပိုင်းရပ်ကွက်တွင် NLD က ၆၄၃ မဲ ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ၆၁ မဲ၊ တစညက ၁၅ မဲ ရရှိခဲ့ပြီး ပယ်မဲ ၃၇ မဲ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
1 April 2012 5:32 PM
ဝါးခယ်မမြို့နယ်ရှိ ထော်ကနွတ်ရွာမဲရုံတွင် NLD ၂၇၀မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၀မဲ၊ တစညပါတီ ၂၉၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ၅မဲ၊ ကြက်တညင်ရွာမဲရုံတွင် NLD ၆၉မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၈မဲ၊ တစညပါတီ ၇မဲ၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ၀မဲ၊ ရွာလည်မဲရုံတွင် NLD ၇၆၄မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၈၀မဲ၊ တစညပါတီ ၅၆မဲ၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ၅မဲ၊ ဖိုးသာခွေးရွာမဲရုံတွင် NLD ၄၉၁မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၂၃မဲ၊ ကနစိုးကုန်းရွာမဲရုံတွင် NLD ၈၈၂မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၀၈မဲ၊ ခွေးလေး(ရှမ်းကုန်း)ရွာမဲရုံတွင် NLD ၃၂၁မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၁မဲ၊ တစညပါတီ ၂၀မဲ၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ၆မဲ၊ ဘဲချောင်းရွာမဲရုံတွင် NLD ၄၄၃မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၃မဲ၊ တစညပါတီ ၄မဲ၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ၁မဲ၊ စာရေးကုန်းရွာမဲရုံတွင် NLD ၇၅၁မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၅၇မဲ၊ အောက်သက်ကယ်ရွာမဲရုံတွင် NLD ၇၂၅မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၇၁မဲ၊ တစညပါတီ ၇၅မဲ၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ၁၃မဲ၊ ဇုက္ကနိကျေးရွာမဲရုံတွင် NLD ၂၁၂မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၃၄မဲ၊ တစညပါတီ ၁၇မဲ၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ၇မဲ၊
1 April 2012 5:28 PM
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်း မဲရရှိမှု အခြေအနေ ၁) တောတန်းကြီးရွာတွင် NLD ၈၁ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၆ မဲ၊ တစည ၁ မဲ။
၂) ရပ်ကွက် အမှတ်(၄) မဲရုံ (၁) တွင် NLD ၁၈၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၆ မဲ၊ တစည ၆ မဲ။
၃) ရပ်ကွက် အမှတ်(၄) မဲရုံ (၂) တွင် NLD ၄၈၈၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၂၂၊ တစည ၂၃။
၄) ရပ်ကွက် အမှတ်(၅) မဲရုံတွင် NLD ၂၂၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၉ မဲ၊ တစည ၃ မဲ။
၅) အောင်ပန်းကုန်း ရွာတွင် မဲပေးသူ ၅၀၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် NLD က ၄၂၀မဲ ရရှိပြီး အနိုင်ရရှိ။
၆) ဗောဓိကုန်းရွာတွင် NLD ၁၇၂မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၄ မဲ၊ တစည ၆ မဲ။
၇) မြေခြားရွာတွင် NLD ၁၅၀ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၁ မဲ၊ တစည ၃ မဲ။
၈) သဲတောရွာတွင် NLD ၈၀ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၁ မဲ၊ တစည ၃ မဲ။
၉) ထနောင်းပင်လဲရွာတွင် NLD ၁၄၃ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၂ မဲ၊ တစည ၆ မဲ။
1 April 2012 5:24 PM
ပခုက္ကူမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးပိုက်ကို အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
1 April 2012 5:23 PM
တန့်ယန်းမြို့နယ်အမှတ် ၁ ရပ်ကွက်မဲရုံတွင် NLD အနိုင်ရရှိကြောင်း မဲစာရင်းမထွက်မီ သိရှိရပြီဖြစ်သည်။
1 April 2012 5:22 PM
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် မဲရုံ ၂၆ ရုံတွင် NLD ပါတီက အနိုင်ရရှိထားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
1 April 2012 5:17 PM
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကန်တော်လေးတောင်ရပ်ကွက် NLD ၇၅၄မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၉ မဲ၊ ရေတွင်းကုန်းမဲရုံ အမှတ် ၂ တွင် NLD ၁၄၆၀မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂မဲ၊ မဲရုံအမှတ် ၄ တွင် NLD ၄၆၁မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၇မဲ၊ မဲရုံအမှတ် ၅ တွင် NLD ၃၆၂မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၂မဲ၊ မဲရုံအမှတ် ၇ တွင် NLD ၄၀၃မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၃မဲ၊
1 April 2012 5:16 PM
ကော့မှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်ရှိ မဲရုံ စုစုပေါင်း ၃၀ လုံးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
1 April 2012 5:14 PM
ဝါးခယ်မမြို့နယ်ရှိ နောက်ဆုံးသတင်းများ ဆေးရုံမဲရုံတွင် NLD ၆၅၇မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၀၉မဲ၊ တစညပါတီ ၁၇မဲ၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ၃မဲ၊ ဈေးမဲရုံတွင် NLD ၂၄၈မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇မဲ၊ တစညပါတီ ၃မဲ၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ၃မဲ၊
1 April 2012 5:13 PM
ပွင့်ဖြူမြို့နယ် NLD ၅၄၆ ၊ ဗောဓိကုန်း တွင် ၂၂၈ ၊ ဆည်တော်တွင် ၆၀၇ ၊ ကြီးအုံကြီးဝ တွင် ၁၅၇၊ ညောင်ကုန်း ၁၅၅ ၊ မကျည်းအုံ တွင် ၄၂၅၊ မကျည်းကုန်း ၁၂၆၊ အနောက်ပိုင်း ရပ်ကွက်တွင် ၅၄၅ ၊ အင်းကုန်းတွင် ၂၃၇ မဲတို့ဖြင့် NLD ပါတီက အနိုင်ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်တွင် ပျမ်းမျှ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အနိုင်ရရှိမည် ဟု NLD ပါတီက ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရှိရသည်။
1 April 2012 5:12 PM
ပဲခူးတိုင်း သနပ်ပင်မြို့ သနပ်ပင် အောက်စု ရပ်ကွက်မဲရုံတွင် NLD ၅၂၉ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၁၂ မဲ၊ တစည ၇ မဲနှင့် ပယ်မဲ ၄၁ မဲ။
1 April 2012 5:11 PM
လက်ပံတန်းမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစိအဖွဲ့ချုပ်မှ ရရှိသောအချက်အလက်များအရ ကျေးရွာ(၂၀)တွင် မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား မကြာမီအချိန်အတွင်း ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်။
1 April 2012 5:08 PM
ပုလဲမြို့နယ်နောက်ဆုံးရအခြေအနေ တောသာမဲရုံတွင် NLD ပါတီမှ ၂၀၀ မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ၂၀မဲ၊ ညောင်ပင်သာမဲရုံတွင် NLD ၂၆၄မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၅၈မဲ၊ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီ ၂ မဲ၊ ပယ်မဲ ၈မဲ ရှိုးမဲရုံတွင် NLD ၂၃၁မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂မဲ၊ ကိုကိုကုန်းမဲရုံတွင် NLD ၁၃၈မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၁၀၃မဲ၊ ကြို့ပင်မဲရုံတွင် NLD ၁၅၅မဲ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၆၄မဲ၊
1 April 2012 5:06 PM
၀ါးခယ်မမြို့နယ် ပတ္တမြားရပ်ကွက် မဲရုံတွင် NLD ၂၀၃ ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၃၇ ၊ တစည ၁၃၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ၀ အလယ်ကွင်းရွာ NLD ၂၄၅ ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၇၃၊ တစည ၂၇၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ၀ တလိုင်းစုရွာ NLD ၃၅၅၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၂၆၂၊ တစည ၄၇ ၊ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ ၁၀
1 April 2012 5:05 PM
မကွေးတိုင်း ရွာသစ်ကြိုရပ်ကွက်ရှိ မဲရုံအမှတ် (၃) တွင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၁၃၅ မဲ ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၁၂ မဲ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ ၃ မဲ ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီက ၁မဲ ရရှိခဲ့ပြီး ပယ်မဲ ၅ မဲ ရှိခဲ့ပါသည်။ ပယ်မဲ ၅ မဲအနက် ၄ မဲမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို မဲပေးထားသည့် မဲလက်မှတ်များ ဖြစ် ကြောင်း သိရပါသည်။
1 April 2012 5:04 PM
တန့်ယန်မြို့နယ် အမှတ် ၄ ရက်ကွက် မဲရုံ မဲစုစုပေါင်း ၇၅၀။ ပယ်မဲ ၄၆ မဲ၊ NLD ၃၄၄ မဲ၊ USDP ၂၀၂ မဲ၊ ရှမ်း ၁၃၂ မဲ၊ လားဟူ ၁၆မဲ ၊ ကိုးကန့် ၁၀။
1 April 2012 5:03 PM
ပုသိမ်မြို့ ၃ ရပ်ကွက်ရှိ မဲရုံအမှတ် (၉)တွင် အမျိုးသား အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၂၀၂ မဲ ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၁၀၇ မဲ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ ၈ မဲ ရရှိခဲ့ပြီး ပယ်မဲ ၃ မဲရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
လှည်းကူးမြို့နယ်၊ ဈေးကြီးရပ်ကွက် မ
ကဲ အဘ တော့ ပင်ပန်းသွားပြီ တော်ပြီ ။
နှုတ်ဆက်စကားအနေနှင့် အယင် Comment လေးပဲ
ပြန်ပြောခဲ့မယ် နော် ။
” သူငယ်ချင်းရေ ၊ စိတ်ပူမနေစမ်းပါနှင့်
ငါကဖြင့် စိတ်ကို မဝင်စားဘူး ။ အကွက်တွေက ရိုးလွန်းလို့ ။
အမှန်က အမေစု ကို လွှတ်တော်ထဲကို ဆွဲခေါ်ချင်နေတာ
သူတို့ဖက်က တပိုင်း မဟုတ်ဘူး ၊ နှစ်ပိုင်းလောက်ကို သေနေတာ ။
( ၁ ) သူတို့ရဲ့ Legitimacy ကို နိုင်ငံတကာက Endorse လုပ်မှာ ။
( ၂ ) အမေစုက Endorse လုပ်ပေးမှ သာ Sanction တွေက Lift မှာ ။
အဲဒီ Sanction တွေ ရှိနေသရွေ့ ဒီတိုင်းပြည်ကို ချမ်းသာ တိုးတက်အောင်
ဘယ်လိုမှ ဆက်လုပ်လို့ မရတော့ဘူး ဆိုတာ သူတို့သိနေပြီ ၊ လည်ပင်းလည်း အစ်နေပြီလေ ။
ပိုဆိုးတာက ဟိုဘက်ကပိတ်လေ ဒီဘက်က တရုတ်ကြီးကျွန်ဖြစ်လေ နှင့်
တဖြေးဖြေးနှင့် တိုင်းပြည်က ခြောက်ထဲနီးလာပြီလေ ။
အမေစု ကိုမှ သူတို့ မခေါ်နိုင်ရင် ၊
သူတို့ကော တိုင်းပြည်ကော No Way Out ပဲ ။
စိတ်မပူနှင့် ၊ သူတို့ အမေစု ကို အပါကို စောင့်ခေါ်မှာ ”
အပေါ်က စာသားလေးတွေကတော့ ၊
မနက် က ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးပါကွယ် ။
အမေစု နိုင်မယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပါ ။ ရင်မခုန်ခဲ့ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ၊ အခုမြင်နေရတဲ့ အခင်းအကျင်းက
Landslide Victory ဖက်ကို ဦးတည်နေပါပြီ ။
” လှိုက်လှိုက် လဲလဲ ကို ဝမ်းသာမိပါတယ် အမေ ရယ် ”
” ရင်ထဲကို ၊ ဆို့နင့် မွန်းကျပ် လာတဲ့ အထိပါပဲ ”
အရီးလတ်ရေ စစ်တပ်နဲ့ နေပြည်တော် နေရာတွေလည်း နိုင်တယ်တဲ့ ..
NLD အောင်နိုင်မှု မဲစာရင်း …
ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ကူးယူ၍ တင်ထားသော ပုံဖြစ်ပါသည်။
အောက်က လင့်အား နှိပ်၍ ကြည့်ရှုပါရန် ….
ဟုတ်တယ်ကို ထူးဆန်း ရေကျန်တဲ့ နေရာတွေ နိင်တာမထူးဆန်း ပေမဲ့ တပ်နယ်မြေ တွေမှာပါ အပြတ်အသတ် နိင်တာကိုတော့ အံဩမိ သလို အရမ်းလဲ အားတက်မိတယ်။ အနာဂတ် နိင်ငံတော် တည်ဆောက်မှူ့ မှာ တပ်မတော်က အဲဒိ လိုပါဝင် လာတာကိုအရမ်း အံဩဝမ်းသာမိတယ်။
အဘဖော ပြောသလိုပဲ အခုဟာက ဒေါ်စုရဲ့ NLD နဲ ကြံ့ခိုင်ရေး ပြိုင်နေတာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လက်တဆုပ်စာ အခွင်ထူးခံ လူတန်းတွေ ကိုတော်လှန် နေတာပါ။
နေပြည်တော်မှာလည်း NLD ပါတီက ၄ နေရာလုံးအနိုင်ရရှိသွားကြောင်း သတင်းကြားနေရပါတယ်။
From Shwe Myitmakha Media Group
ကျွန်မ လျှော့တွက် လိုက်မိတဲ့ ( NLD အတွက် ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့) ဝန်ထမ်းတွေ နဲ့ စစ်တပ်က လူတွေ ကို ကျွန်မ နှလုံးသားထဲ ကကို ရို့ကျိုး ပြီး တောင်းပန်ပါတယ်။
တနည်း အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်မှု ကို အတိအလင်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲပါ။
တကယ်တော့ ဒါဟာ အမှောင်ထဲကနေ အလင်းရောင် ကို မြင်လိုက် ကြတဲ့သဘောပါဘဲ။
အလင်းရောင်ကောင်းကောင်း နဲ့ လေကောင်းလေသန့် ရှိတဲ့ နေရာထဲ ကိုတော့ မရောက်သေးပါဘူး။
ကျွန်မတို့ အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ် စည်းစည်းလုံးလုံး နဲ့ ဆက်ကြိုးစားဖို့တွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
ဒါဟာ အဲလိုကြိုးစားဖို့ လမ်းစပေါ့။
BIG CONGRATULATIONS NLD!
NLD ကလူတွေ စင်ပေါ်ရောက်ပါတော့မယ်။
ကျွန်မတို့ ကတော့ ဘယ်သူဘဲ စင်ပေါ်ရောက်ရောက်၊ အမှားကို ထောက်ပြ ဝေဖန်ဖို့
စောင့်ကြည့် နေမှာနော။ :D
စစ်တပ်မဲဆန္ဒနယ်တွေအားလုံးတော့ရှုံးတယ်ပြောတယ် အာအက်(ဖ်)အေ ကအမရဲ့ ..သူတို့ လဲ ဘယ် risk ယူမလဲနော် နားလည်ပေးလိုက်ပါ
ဘယ်သူတွေ စင်ပေါ်ရောက်ရောက် အမှားကို ထောက်ပြရမှာပါ။
ကြောက်လို့သာ နမ်းရ နှုတ်ခမ်းက တာတေလန် ဂျီးစော်ကနံ ဖြစ်တဲ့ နေရာလောက် နိုင်မှာပေါ့ဗျာ
သွေးထဲမှာစီးနေတာ ရဲရဲနီတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းသွေးဗျ
မခင်လတ် ရယ်လေးစားရပါတယ်။ အစ်မရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုအားကျမိပါတယ်။
အခုဝမ်းသာလွန်းလို့ လက်တွေတောင်တုန်နေတယ်။ အော်ဟစ်ပြီးကိုအောင်ပွဲခံချင်တာပါ။
ပြည်သူတွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှုက အံ့မခန်းပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပလျက်ရှိသော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထု၏ ပါဝင်မှုကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် က အသိအမှတ်ပြု ပြောကြားလိုက်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များအတွက် ကူညီထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။
Mizzima – News in Burmese
သိက္ခာရှိသော အောင်နိုင်မှုဖြစ်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှာကြား
လင်းဘိုဘို | ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) တနင်္ဂနွေနေ့၊ ဧပြီလ ၀၁ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၄၈ မိနစ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်များ ရလဒ်ကောင်းများ ရနေချိန်တွင် သိက္ခာရှိသည့် အောင်နိုင်မှု
… ဖြစ်စေရန်အတွက် တဘက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ထိခိုက်နိုင်သည့် အပြောအဆို၊ အမူအယာ၊ အလုပ်အကိုင်များ မပြုလုပ်ရန် အဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်များကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မှာကြားလိုက်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမည်ဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားပြု၍ ယနေ့ညပိုင်း လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် အဆိုပါ မှာကြားချက် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အမှတ် (၉၇-ခ)၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်း
ရက်စွဲ ။ ။ ဧပြီလ ၁ ရက်၊ ၂ဝ၁၂
ယနေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အရ ပြည်သူလူထု၏ ထောက်ခံမှုကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်များ အောင်နိုင်မှုရရှိကြောင်း သတင်းများ တက်နေပါသည်။
ယခုလိုအချိန်မှာ ထောက်ခံသည့် ပြည်သူများနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ ပျော်ရွှင်ကြမည်မှာ သဘာဝကျပါသည်။
သို့သော်လည်း တဖက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား စိတ်ထိခိုက်၊ စိတ်မကောင်း ဖြစ်စေနိုင်မည့် အပြောအဆို၊ အမူအယာ၊ အလုပ်အကိုင်များ လုံးဝရှောင်ရှားကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူ၏ အောင်နိုင်မှုသည် သိက္ခာရှိသော
အောင်နိုင်မှု ဖြစ်စေရန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်များအားလုံး အထူးသတိပြုစေလိုပါသည်။
I didn’t see that comment before.
That’s why I posted it asaseparate one.
I did it again….. :-(
ငဒို့ တိုင်းပြည်ကြီး ပြောင်းလဲ တိုးတက်တော့မှာ သေချာသွားပါပြီကွယ် ။
သမ္မတ အိုဘားမား မြန်မာ နိုင်ငံသို့ လာရောက်မည် ။
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမား ရဲ့ ခရီးစဉ်များကို
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် ဧပြီ ၁ ရက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အပြီးနှင့်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ နိုဝင်ဘာ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ကြားကာလတွင်
သမ္မတ အိုဘားမား မြန်မာ နိုင်ငံသို့ တရားဝင် နိုင်ငံရေးခရီးစဉ်အဖြစ် လာရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း
အိမ်ဖြူတော်က ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန် လိုက် သည်။
ကလောမြို့နယ်မှာ NLD မဲအပြတ်အသတ်သာတယ် …….. ပအို့ဝ်ရွာတွေကလွဲလို့ ။ ပအိုဝ်ရွာတွေမှာက PNO ကများတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြို့ပေါ်တွေမှာ အပြတ်အသတ်ပဲ …….. နိုင်တယ် ……….. ။
သမီးလည်း မနေ့ကတည်းက ရင်ခုန်နေသူတွေကိုပြောထားပါတယ် NLD ပြိုင်မယ့် နေရာတိုင်းမှာနိုင်ပါမယ် ဆိုတာကိုလေ ….. အဘ FR ပြောသလိုပါပဲ အမေစုကို လွှတ်တော်ထဲခေါ်ချင်လို့ ဟန်ရေးပြလိုက်တာပါ … ဒါဒို့ရဲ့ပြည် ဒါဒို့ရဲ့မြေပါပဲ ……
မြန်အောင်သား မှော်ဆရာ CJ တာဝန် ထမ်းဆောင်လိုက်ပါတယ် နော…
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဟင်္သာတခရိုင် ၊ မြန်အောင်မြို့နယ်တွင် ဧပြီ 1 ရက်နေ့၌ ကျင်းပလျှက်ရှိသော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေများကို စုံစမ်းရရှိသမျှ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်အောင်မြို့နယ်တွင် ဦးကျော်မြင့် (NLD)၊ ဒေါက်တာသန်းထွဋ် (ပြည်ခိုင်ဖြိုး)၊ ဦးဝင်းလှိုင် (တဆည)တို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။
မဲပေးနှိုင်သူဦးရေ 155400 အတွက် မဲရုံပေါင်း 69 ရုံ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။
ည ၈ နာရီ အချိန်အထိ ရေတွက်ပြီးစီးသော မဲရုံအရေအတွက် 37 ရူံတွင် NLD မှ ၃၆ နေရာအနိုင်ရရှိနေပြီး ခလရ (၅၁) မဲရုံတွင်မူ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ (351)မဲ ၊NLD (10)မဲ၊ တဆည (4)မဲဖြင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
မြန်အောင်မြို့ ကျိတ္တန်းလမ်းတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော NLD ခရိုင်ရုံးခွဲတွင် ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေအား ကြော်ငြာဘုတ်ဖြင့် Update လုပ်ဖော်ပြလျှက်ရှိပြီး လာရောက်အားပေးသူများဖြင့် တိုးမပေါက်အောင် စည်ကားလျှက်ရှိနေသည်။လာရောက်အားပေးသူများမှာလဲ တစ်စ တစ်စ ပိုမိုများပြားလျှက်ရှိနေသည်။
ပြည်သူတွေ ဒီလိုပြနိုင်ခဲ့တာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပါဘဲ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ NLD နဲ့ အတိုက်အခံများရဲ့ ကြိုးဆွဲတာကိုလည်း မကခဲ့၊ အစိုးရရဲ့ ကြိုးဆွဲတာကိုလည်း မက ဘဲ တိုင်းပြည်မျက်နှာ တစ်ခု ဘဲ ကြည့်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပိုလိုလေးစားခဲ့ရပါတယ်။
ဟုတ်တယ် ရွှေကြည်တို့ဒီတစ်ခေါက်မဲမပေးရလို့။ ပေးရလို့ကတော့ လာထား ခွပ်ဒေါင်းပဲ။
ကြားရတာ သိပ်ပျော်လိုက်တာဗျာ။ အောင်မြင်ကြပါစေ
ညတိုင်း ညတိုင်းတွေးနေမိတယ် ၊ အခုလို အပြောင်းအလဲမျိုးပေါ့လေ ၊
နိုင်ပြီဆိုတာသိရ မြင်ရတော့ ဘဝင် ဆိုတဲ့ အလုံးကြီးက ဝုန်းကနဲ ကျသွားတယ်၊
သူတို့ ကြော်ငြာတဲ့ အချိန်ထိတော့ စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာ့ Media များရဲ့ Latest News များကို
Yahoo က သတင်းခေါင်းစဉ်တွေ စုပေးထားတာပါ.။
Good luck NLD. I returned from NLD office about 8 p.m. I saw NLD almost win. There were about 20000 peoples in front of that office with great happy . If my country get real democracy, Myanmar will become liked Singapore.
The people had spoken.
They had given the mandate to NLD and now the people party have to fulfill the duty, to serve the people.
People will have to carry on their support morally, mentally and physically towards NLD.
With the will of the people, NLD`s task is to bring in the much needed Rule of Law for Burma.
All unjust laws made by the military Junta have to be thrown away.
I hope people will understand the importance of their continued support for the Lady.
Congratulation to all Burmese citizens who paid their sweat, blood, lives and deaths for the mother country.
ယှဉ်ပြိုင်ရာ ၄၄ နေရာလုံး NLD နိုင်ပြီ
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန | တနင်္ဂနွေနေ့၊ ဧပြီလ ၀၁ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြီးစီးသွားသည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီးမှ မဲဆန္ဒနယ် ၄၄ နေရာလုံးတွင် အနိုင်ရရှိသွားကြောင်း NLD ရုံးချုပ်မှ သိရသည်။
နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်တွင် ယှဉ်ပြိုင်နေသော အဆိုတော် ဇေယျာသော် အနိုင်ရရှိကြောင်း နောက်ဆုံး သိရပြီးနောက် ၄၄ နေရာလုံး အနိုင်ရရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
၄၄ နေရာအနက် ၃၆ နေရာမှာ မဲရေတွက်ပြီးဖြစ်ကာ ကျန် ၈ နေရာတွင် မဲရေတွက်ဆဲဖြစ်သော်လည်း NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက ပြိုင်ဘက်များအား မဲအရေအတွက် အများအပြား အသာဖြင့် ဦးဆောင်ပြီး
သေချာနေသည့်အတွက် ၎င်းတို့ အနိုင်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း ရုံးချုပ်သို့ ဖုန်းဖြင့် သတင်းပို့လာသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ယှဉ်ပြိုင်နေရာအားလုံး အနိုင်ရရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လစ်လပ်နေရာ ၄၈ နေရာ ရှိသည့်အနက် ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်း၊ ဖားကန့်နှင့် ဗန်းမော်မြို့များတွင် လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပေ။ ကျန် ၄၅ နေရာ တွင် NLD က ၄၄ နေရာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
နှစ်ထပ် ရှိ မှ မှတ်မိ မှာ လား သုံး ထပ် ရှိ သွား အောင် ၂၀၁၅ မှာလဲ လာမယ်
မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင်သာ အသင်တို့ မသိဖြစ်နေတာပါ
ဖျာပုံ၊ ဒေးဒရဲ ( အမျိုးသားလွှတ်တော် ) ဧရာဝတီတိုင်း
ဥတ္တ္တရသီရိ မန္တလေး ( နေပြည်တော် )
ဒက္ခိဏသီရိ မန္တလေး ( နေပြည်တော် )
ကန့်ဘလူ၊ ကျွန်းလှ၊ ရေဦး၊တန့်ဆည် ( အမျိုးသားလွှတ်တော် ) စစ်ကိုင်းတိုင်း
ပုဗ္ဗသီရီ မန္တလေး ( နေပြည်တော် )
ဇဗ္ဗူသီရိ မန္တလေး ( နေပြည်တော် )
နေရာ ၄၁ နေရာ အနိုင်ရရှိသွားပါကြောင်း
Today, people of Burma has spoken the loudest voice they have been keeping silent in their hearts for almost three-quarterth the century. Going back to 1990 election, people had demonstrated first time of their wish in the general election; convened by military-run regime. But the result was quickly denied by the iron-gripped regime for no reason which left the regime as one of the most crooked government in the world’s history. The words of ‘democracy’ and ‘Daw Aung San Su Kyi’ are strictly barred from being used in public.
The political wind has changed since the dialogue, happened less thanayear ago, between the Nobel Laureate Aung San Su Kyi and the so-called “elected” president and retired general Thein Sein. Since then, Daw Su expressed her personal confidence of the president although she later admitted it is hard to find the free and fair democracy in the foreseeable future. But we need to accept the fact that it isahuge challenge for the current government and its crony to just give up their enormous power, un-touched wealth and near-zero self-criticism they have been enjoying for almost their entire lives.
The spread of news of NLD’s by-election landslide victories (yesterday’s result) to the world is thrilling! It is noted an incident of overwhelming votes by the soldiers in favor of National league for Democracy (NLD), inside the Light Infantry Division 101 in Pokkaku, reminds me of the past 1990 election. This is what we call “peoples’ voice”.
I wonder how the past general election result, that had been tainted with unfair balloting system, will be portrayed by the history.
I wonder how the current legislative elected members of both “Hluttaws” will be thinking about their future.
I wonder current 25% military-mandated legislature will be coursed.
I wonder how the elected Daw Aung San Su Kyi will be allowed in the Hluttaw in shaping the Burma’s 60 millions citizens’ future.
I wonder how the current quasi-democratic rule will be effected.
I wonder how the century-long deeply divided ethnic conflicts will be ended.
I wonder how long we have to wait see the real national reconciliation that has been window-dressed by the past government.
I wonder how the minority ethnic groups will seek and participate with genuine dialogue with the government of their choice.
But I believeaperson like YOU have seen the end of the tunnel that you have long been waiting for.
YOUR TASK: stay tune with current development of our nation AND find the ways to help your families and friends at your homeland who have been deprived of true value of democratic norms.
သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ် ကော်မရှင်များမှ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်များ
NLD ၆၂၀၉၈ မဲ
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၄၈၀၆၇ မဲ
ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး (တစ်သီးပုဂ္ဂလ) ၆၃၇၈ မဲ
အမျိုးသားနိုင်ငံရေး မဟာမိတ်များ အဖွဲ့ချုပ် ၂၆၅၀ မဲ
ပယ်မဲ ၁၃၇၈၈ မဲ
ခုမှပဲကြားဖူးတယ်.. ပျောက်မဲ ဆိုတာကိုလေ..
cherry phyu says:
မနေ့က NLD ကားတစီး အလံတလွင့်လွင့်နဲ့ ဘယ်မဲဆန္ဒနယ်ကပြန်လာလဲမသိဘူးတွေ့လိုက်ရတယ်…ဒါနဲ့ ကားဘေးကဖြတ်သွားတော့ နိုင်လားဆိုတဲ့အဓိပါယ်နဲ့ လက်မထောင်ပြပီးမေးလိုက်တယ်……. ကားပေါ်ကလူ
တွေအားလုံးလက်မပြန်ထောင်ပြပြီး အသံတိတ်ဖြေသွားကြတယ်..ညနေ 53း0 လောက်ရှိပြီ
အဲဒီတုန်းထဲက ရင်ထဲကပီတိကမျက်ရည်တောင်ဝဲစေတယ်…. အခုဒီနေ့သတင်းတွေအကုန်သိရတော့
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နေရာ ၄၅ နေရာအနက် ၄၃ နေရာကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရ
MONDAY, 02 APRIL 2012 15:52 (http://news-eleven.com)
ယနေ့မွန်းတည့် အချိန်အထိ သိရှိရသော သတင်းများအရ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရာ နေရာ ၄၅ နေရာ အနက် နေရာ ၄၃ နေရာကို
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အနိုင်ရရှိသည့်နေရာများကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အနိုင်ရရှိသည့် နေရာ ၄၃ နေရာနှင့် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများ၏ အမည်ကိုလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးရှေ့ရှိ LED ဆိုင်းဘုတ်တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာလျက်ရှိနေပါသည်။
ယင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များအရ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် (ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်သော ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေရာ သုံးနေရာမှ လွဲ၍) နေရာအားလုံးနီးပါး အနိုင်ရရှိထားကြောင်း သိရပါသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အနိုင်ရရှိထားသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်များမှာ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ မင်းကင်းမြို့နယ်၊ လောင်းလုံမြို့နယ်၊ ကျွန်းစုမြို့နယ်၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ထန်းတစ်ပင် မြို့နယ်၊ သနပ်ပင်မြို့နယ်၊ လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ မကွေးမြို့နယ်၊ ရေစကြိုမြို့နယ်၊ မြိုင်မြို့နယ်၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ တံတားဦးမြို့နယ်၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ ကော့မှူးမြို့နယ်၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ကလောမြို့နယ်၊ ပုသိမ်မြို့နယ်၊ မအူပင်မြို့နယ်၊ မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ၀ါးခယ်မမြို့နယ်၊ မြန်အောင်မြို့နယ် အစရှိသည်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်များဖြစ်သည့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အမှတ်(၃) မဲဆန္ဒနယ် (ကန့်ဘလူ၊ ကျွန်းလှ၊ ရေဦး၊ တန်ဆည်) ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အမှတ် (၇) မဲဆန္ဒနယ် (အုတ်တွင်း-ထန်းတပင်)၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အမှတ်(၄) မဲဆန္ဒနယ် (တောင်တွင်းကြီး)နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အမှတ် (၁၀) မဲဆန္ဒနယ် (ဖျာပုံ-ဒေးဒရဲ) တို့တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က အနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်းကို အဖွဲ့ချုပ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ သို့သော် ရှမ်းပြည်နယ် အမှတ် (၃) မဲဆန္ဒနယ် (လားရှိုး-တန့်ယန်း-မိုင်းရယ်-သိန္ဒီ-ကွမ်းလုံ) ဒေသနှင့် ပတ်သက်၍မူ အဖြေအတိအကျ ထွက်ပေါ်လာခြင်း မရှိသေးပဲ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က လာရှိုးတွင် အနိုင်ရရှိထားကာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက တန့်ယန်းတွင် အနိုင်ရရှိထားကြောင့် ဧပြီ ၂ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်း အချိန်အထိ ရရှိသော သတင်းများအရ သိရပါသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မရှိခဲ့သည့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အမှတ် ၇ မဲဆန္ဒနယ် (ဗန်းမောက်၊ ကောလင်း၊ ၀န်းသို၊ ပင်လယ်ဘူး) တွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ကောလင်းနှင့် ပင်လယ်ဘူးတွင် အနိုင်ရရှိထားပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ၀န်းသိုတွင် အနိုင်ရရှိထားကြောင်းသိရသည်။ ဗန်းမောက်မြို့နယ်၏ မဲရလဒ်များနှင့်ပတ်သက်၍မူ စောင့်ဆိုင်းနေရဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း မဲဆန္ဒနယ်တွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစောလှိုင်ကို အမည်စာရင်း တင်သွင်းခဲ့သော်လည်း အရည်အချင်း မကိုက်ညီသဖြင့် ပယ်ချခံခဲ့ရပါသည်။
တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်များဖြစ်သည့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အမှတ်(၂) မဲဆန္ဒနယ် (က၀-၂) နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အမှတ်(၂) မဲဆန္ဒနယ် (ရေကြည်-၂) တို့တွင်လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးရှေ့၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူလူထုသို့ မိန့်ခွန်း အတိုတစ်ခု ပြောကြားခဲ့ပြီး အဆိုပါမိန့်ခွန်းတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ အောင်နိုင်မှုသည်၊ ပြည်သူလူထု၏ အောင်နိုင်မှုသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူ လူထု၏ ပူးပေါင်း ပါဝင်များကြောင့် ယခုအောင်ပွဲကို ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင်း၊ အခြားသော အဖွဲ့အစည်းတွေ စိတ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် မလုပ်သင့်ကြောင်း၊ ယခုအချိန်မှ စတင်ပြီး ငါ နိုင်ပြီဟေ့လို့မတွေးဘဲ ငါတို့ အလုပ်တွေ စလုပ်ရမယ်လို့တွေးရမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ခေတ်သစ်ကို စတင် မျှော်လင့် နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အစရှိသည်တို့ကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။